03/02/2018 - Page 2 sur 4 -
Fitantanana faritra mando : Fikambanana telo notolorana mari-pankasitrahana
03/02/2018 admintriatra 0
Fikambanana miisa telo, isan’ireo misahana ny fikarakarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny fitantanana ny tany mando, no notoloran’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, ny Haivoary ary ny Ala mari-pakasitrahana, omaly. Teny amin’ny zaridaina …Tohiny
Fitsarana fiarakodia : Nafindra eny Betongolo
Foana ny fifanaraham-panofanana nifanaovan’ny foibe fitsarana fiarakodia tamin’ny orinasa Omavet. An-taonany maro no fantatra fa nanofan’ny foibe fitsarana fiarakodia ny toerana teny Nanisana, izay an’ny orinasa omavet. Tapitra omaly ny fifanarahana teo amin’ny roa tonta, …Tohiny
Neypatraiky Rakotomamonjy : « Tsy misy ambonin’ny lalàna »
Manomboka ny fanadiovana eo anivon’ny asa izay iandraiketan’ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, ary ny fampivoarana ara-kajy mirindra. Nandraisana fepetra avokoa ny momba ny telefaonina finday tahaka ny tsy fampiasana ny finday tsy misy IMEI …Tohiny
Orinasa Filatex : Mpiasa iray mampitaraina ireo orinasa manatanteraka ny asan’ny orinasa
Orinasa goavana manana ny lazany eo amin’ny fanorenana trano sy toeram-ponenana eto Madagasikara ny Filatex. Maromaro ireo orinasa ampiasain’izy ireo amin’ny fananganana ireny fotodrafitrasa ireny. Tato anatin’ny herintaona anefa, dia misy amin’ireo orinasa manatanteraka ny …Tohiny
Voaporofo izao fa mbola mamim-bahoaka ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha nitsidika ny distrikan’i Vatomandry tao amin’ ny kaomina Niarovana Caroline, mantsy ny Filoham-pirenena omaly, dia marobe ireo vahoaka nitsena azy tamin’izany. Horakoraka, hiakiaka, sns, ary ...Tohiny